सांसद तामाङको प्रश्न : अढाई बर्ष भयो, गाँजासम्बन्धी विधेयकमा किन भएन छलफल ?सांसद तामाङको प्रश्न : अढाई बर्ष भयो, गाँजासम्बन्धी विधेयकमा किन भएन छलफल ? – Naya Page
सांसद तामाङको प्रश्न : अढाई बर्ष भयो, गाँजासम्बन्धी विधेयकमा किन भएन छलफल ?
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको गाँजासम्बन्धी विधेयक पास गर्नुपर्ने बताएका छन् । आज (बिहीबार) को प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद तामाङले संयुक्त राष्टसंघले समेत गाँजालाई वैधानिकता दिएको भन्दै नेपालमा पनि यसलाई छिटोभन्दा छिटो वैधानिकता दिनुपर्ने बताए ।